Kambani Overview/Profile - Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd.
Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd iGMP, ISO nhevedzano, Kosher uye Halal certified company, yakatsaurirwa kuzivikanwa, kusimudzira uye kugadzira kwe botanical extracts uye zvinobva pazviri.Nekugona kwakasimba kweR&D uye tekinoroji yekugadzira yepamberi, Ruiwo anoenderera mberi nekugadzira hunyanzvi nemishonga yemakwenzi inoshandira Pharmaceutical, Nutraceutical uye Cosmetic maindasitiri.
1. Takagadzira hurongwa hwekudyara-kugovera pasi rose;kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yezvokurapa chaiyo.Nezvekuenderera mberi uye kusiyana-siyana kwemakwenzi, Ruiwo akazvivakira pachedu pakudyara miriwo kuti ape zvemhando yepamusoro zvinhu izvo zvinovimbisa kusachinjana mhando.GAP iri pasi pekusimbiswa.
2. Takasimba muR&D.Isu tinogadzira iyo inonyanya kushanda uye yakasarudzika botanical zvinongedzo zvePharmaceutical, Nutraceutical uye Cosmetic maindasitiri, uye tinosanganisa hunhu hwemuriwo wega wega netsvakiridzo yedu yesainzi kuti tigadzire iyo yakakwana kugadzirwa zvakanaka.
3. Isu takagadzira advanced quality control system uye tracibility system mulab yedu.Tine data rakanyatsojeka rinouya kubva kunyanzvi dzinokwanisa uye zvemberi zvekuyedza zviridzwa izvo zvinotigonesa kuumba nekukurumidza uye kwakanyatso kuyedza kugona kuti tive nechokwadi chemhando yepamusoro yechigadzirwa ine simba repamusoro.
PaRuiwo, isu tine simba mukugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi pasi pemamiriro ekuenderera uye kusiyana kwemishonga.Isu tinotenda kuti izvo zvakasikwa zvehunyanzvi zvinongedzo uye tekinoroji yehunyanzvi ndiyo hwaro hwakanakisa hwekuti tishumire zvinodiwa nemutengi wedu.Isu tinokwanisa uye tinodada nekupa yakanyanya kunaka mhinduro yekuwedzera kukosha kune zvigadzirwa.
Valmane Valerian Extract Ginseng Root Extract Poda Active Salicin Bitter Melon Fruit Extract Luteolin Olive Leaf Extract Yakakwirira Oleuropein